Muqdisho: Taliyaha AMISOM oo Bahdishay Sh. Shariif, Xasilinta Amingana kala Tashatay Mr. Farmaajo | hubaalnewspaper
Agoosto 11, 2012
Muqdisho: Taliyaha AMISOM oo Bahdishay Sh. Shariif, Xasilinta Amingana kala Tashatay Mr. Farmaajo
Muqdisho (Togaherer/Wakaaladdaha)-Ra’isal Wasaarihii Hore ee TFG Maxamed Cabdillaahi Maxamed (Farmaajo) iyo Taliyaha Ciiddamada AMISOM ee ku sugan Muqdisho ayaa ka wada hadlay arrimo la xidhiidha wada shaqeynta labada dhinac iyo sidii laysaga kaashan lahaa in jawi nabadeed lagu soo dabbaalo magaalada Muqdisho inta lagu gudo jiro xaaladda kala guurka ah ee doorashada.
wada hadalladan ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay kadib markii iska hor imaad dhimasho iyo dhaawac sababay dhex maray Taageerayaal soo dhawaynayay Mr. Farmaajo oo toddobaadkii hore ku soo laabtay magaalada Muqdisho si uu isugu sharraxo doorashada madaxtinimada iyo ciiddamada AMISOM ayaa la sheegay in Taliyahoodu kala hadlay Farmaajo sidii uu taageerayaashiisa ugu wacyi gelin lahaa ilaalinta amniga. Qoraal Saxaafadda loo qaybiyay ayaa lagu sheegay in kulan kaasi ku soo gebogaboobay is afgarad, iyadoo ra’yul caamka bulshadu ku tilmaamay mid muujinaysa meeqaamka uu Mr. Farmaajo ka joogo bulshadda iyo ciidankaba, dhinaca kalena bahdilaysa maamulka Sh. Shariif ee talada ku magacaaban.
Dhinaca kale, AMISOM waxa ay ka tacsiyaysay dhacdadii dorraad ka dhacday fagaaraha Sayidka oo lagu rasaaseeyay dadweyne muujinayay taageeradooda murrashax Farmaajo ay u hayaan, wuxuuna u xaqiijiyay in ciddii falkaas samaysay xabsiga la dhigay sharcigana la hor keenayo. Sidoo kale , Taliyaha ciiddamada AMISOM Gen. Lokech ayaa u ballanqaaday Mr. Farmaajo in wixii culeys amni ah ee soo wajaha ay diyaar u yihiin inay kala qeyb qaataan, oo ay ka hortegi doonaan wax kasta oo khal khal amni dhalin kara.
← Maxaa damaanad haystaan macaamisha dahabshiil hadii arinkii dhacay mid ka culusi yimaad?
Maraykanka oo Taageero Hore leh u Muujiyey Murrashax Nus Qarni ku Jiray Siyaasadda u Tartamaya Madaxtinnimada Soomaaliya →